साउदीमा सोमबार झन्डै ६ सय कोरोना संक्रमित निको : साउदीमा सोमबार झन्डै ६ सय कोरोना संक्रमित निको :
साउदीमा सोमबार झन्डै ६ सय कोरोना संक्रमित निको
२० आश्विन २०७७, मंगलवार ११:१५ । साउदी अरेबिया
साउदी अरेबियामा दैनिक कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमित घट्नेक्रम जारी छ । यसै क्रममा सोमबार ३७९ जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.मोहम्मद अल अब्दुलीले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
प्रवक्ता डा. अब्दुलीका अनुसार हालसम्म यहाँ तीन लाख ३६ हजार ७६६ जना कोरोना संक्रमित पुगिसकेका छन् ।’ कुल संक्रमितमध्ये ९ हजार ८१३ जनाको साउदीको विभिन्न कोभिड अस्पतालहरुमा उपचाररत हुनुहुन्छ,’ प्रवक्ता डा.अब्दुलीले भने,’ ती उपचाररतमध्ये ९३८ जना बिमारीहरु गम्भीर अवस्थामा रहनुभएको चिकित्सक साथीहरू बताउनुभएको छ ।’
त्यसैगरी यहाँ सोमबार ५७० जना कोरोना बिरामीहरु उपचारपछि घर फर्किएको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म तीन लाख २२ हजार ५५ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भैसकेका छन् ।
साउदी अरेबियामा कोरोनाबाट हुने मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ । यसै क्रममा सोमबार २३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको प्रवक्ता डा. अब्दुलीले बताए । प्रवक्ता डा.अब्दुलीका अनुसार हालसम्म कोरोना भाइरसबाट यहाँ ४ हजार ८९८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।